theZOMI: [mrsorcerer:38027] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ငရဲကျနေတဲ့ ကျန်းမာရေး
[mrsorcerer:38027] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ငရဲကျနေတဲ့ ကျန်းမာရေး
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ငရဲကျနေတဲ့ ကျန်းမာရေး
Arr Gyi shared Maha Mingyi's photo.
မြန်မာပြည်၏ ကျန်းမာရေးအကြောင်း တကမ္ဘာလုံး အုပ်အော်သောင်းနှင်း ပြောဆိုနေခဲ့ကြသည်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ဗိုလ်စေားမောင် တို့ တက်လာသော ခေတ် လွ...န်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်နှီပါးလောက်မှပင်မကဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဌာနမှပင် ခလေးများမွေးဖွားချိန်တွင် လိုအပ်သော ကာကွယ်ဆေးများထိုးပေးရန် ၈၀ ရာနုန်းမျှလိုအပ်နေပြီး လူဦးရေ တသောင်းအတွက် ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၂၃ ယောက်သာရှိသည့်အပြင်၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာကြီး၏ ၅၇ နိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးလုပ်သားရှားပါမှုကို လက်တွေ့ ရင်ဆိုင်နေရသော တိုင်းပြည်တပြည်ဖြစ်ကြောင်း (ဒဗလယူ အိပ်ခ်ျအို) အတိအလင်းထုတ်ပြန်သည်ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေပုံရလေသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဌာန၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွက်ချက်ထုတ်ပြန်မှုအရဆိုလျှင်၊ မြန်မာပြည်သည် ဆေးဝါကုသရေးကရိယာ အလုံလောက်မရှိပဲ နေထိုင်သူ လူဦးရေပေါင်း ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်း)တွင် ဆရာဝန်နှင့် အကူသူနာပြု ၊ လူနာ စောင့်ရှောက်သူ အားလုံးပေါင်း (၁၃) ဦးသာ ရှိသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြပြန်၏။ မြန်မာ အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ တနိုင်ငံလုံး လူဦးရေအတွက် ဆရာဝန်ပေါင်း ၂၆၀၀၀ သူနာပြုပေါင်း ၂၃၈၀၀ နှင့် လူနာအကူ ၁၉၀၀၀ ရှိသည်ဟု အတိအလင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး စံချိန်အား သောက်ဂရုမစိုက်သလိုထုတ်ပြန်းကြောင်း တွေ့ရပြီး လူဦးရေ သန်းပေါင် ၆၀ခန့် အတွက် လိုအပ်ချက်မှာ ပုရွက်ဆိတ်ဆင်ခြေနှင့် ပြသနာ ဆင်ကောင်ကြီးလောက်ဖြစ်နေကြောင်း သတိမမူမိခဲ့ပါ။
Myanmar had an estimated 13 doctors and nurses/midwives per 10,000 residents without enough facilities, according toaWHO 2010 calculation. As of 2010, there were about 26,000 doctors, 23,800 nurses and 19,000 midwives nationwide, according to the government.
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှတော့ အစိုးရမှ နေထိုင်သူ လူဦးရေတသောင်းတွင် ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁၅ဦးရှိကြောင်း တရားဝင် ကြွာလုံးထုတ်ထာလဲ့လေ၏၊ သို့သော် မည်သို့သော ကျန်းမာရေးလုပ်သားအမျိုးစားအား စနစ်တကျ စီစစ်ထုတ်ဖေါ်ပြသထားခြင်းမရှိပဲ ရောချထားသည်ကို တွေ့ရပြန်သည်။ ပြည်သူတို့ အခြေခံနေစဉ်ဘ၀အတွက် အထောက်ပံ့လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးလုပ်သာ ၂၃ ယောက်ခန့် လိုအပ်သော နိုင်ငံတကာ၏ စံနုံန်းကို တ၀က်လောက် ၄င်းတို့ လိုက်မှီကြောင်း ကြွားလုံးထုတ်ပုံရသည်။
ကျန်မာရေးဆိုင်ရာ စီမံရေးရာဌာနမှ ဒေါက်တာ နီလာတင်က အစိုးရမှ ကျန်မားရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ကြိုးပမ်းအကောင်ထည်ဖေါ်ရာတွင် အခြေခံ လူနေမှုဘ၀ အထောက်ပံအရင်းမြစ် လျော့နည်းပြတ်လပ်နေကြောင်း (အိုင်အာအိုင်အန်)သို့ အိပ်သွန်ဖာမှောက် ၀န်ခံခဲ့ဘူးသည်။ သူမ၏ ၀န်ခံချက်အဓိပ္ပါယ်မှာ တိုင်းပြည်၏ ချွတ်ခြုံကျမှုကြောင့် အချို့သောတောင်တန်းဒေသတွင်နေထိုင်သူများသည် မြို့များပေါ်တွင်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံသို့သွားရောက်ကုသရန် တနေကုန်လောက် ခရီးလမ်းတွင်ကျန့်ကြာနေပြီး အများသောအားဖြင့်ဝေးလံသော ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်သူများအဖို့ လူနာတယောက်အနေဖြင့် ဆေးခန်းတခုခုထံရောက်ရှိနိုင်ရန်အလို့ငှာ ၄ နာရီမျှလောက်ဝေးသော ခရီးကို ဖြတ်သန်းရသည်ဟု ဆိုလေ၏။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် အင်မတန်ကြီးမားသော လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်ကြီးများရှိသော တိုင်းပြည်များထဲမှ တနိုင်ငံဖြစ်သည့် မြန်မာပြည်အဖို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆင်တန်းသည် ချေနင်းခုံမှ အ၀တ်စုတ်လောက်သာပင်ရှိပြီး၊ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများအား ရောဂါခံစားမှုရရှိပြီး ပြင်းထန်လာသော အချိန်လောက်မှသာပင် ထိုလူနာအဖို့ ရရှိသော အခြေနေတွင် ဖြစ်နေလေသည်ဟု (ကျန်းမားရေးဆိုင်ရာ အေ၇ှ့ဖြားစာစောင်က) ဖေါ်ပြထားလေသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်လောက်မှ ရာစုနှစ်တ၀က်မျှ မြန်မာ စစ်အုပ်စုသည် လက်ငင်းငွေသားများဖြင့် ၄င်း၏ လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်အား အားတက်သရော ထည့်သွင်း အသုံးပြု အုပ်ချုပ်နေခဲ့သည့် စစ်အုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်ပြီးနောက် နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာ့ကျန်းမာရေးအား စီစစ်ခဲ့ကြည့်ရာတွင် ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင် အနိမ့်ကျ နုံန်ခြာဆုံးသော ကျန်းမာရေစောင့်ေ၇ှာက်မှု အာရုံလွတ်ကင်းသည့် နိုင်ငံဖြစ်နေကြောင်း နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်မှု အဖွဲ့မှ ဆိုပါသည်။
During almost halfacentury of military rule which officially ended last2year, Myanmar's junta generously funneled cash to the armed forces but presided over one of the world's lowest outlays on public health according to international healthy watch dogs.
အမ်အက်စ် အက်ဖ်မှ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဌာန၏ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်း ချထားသော မူအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါခံစားနေရသော လူဦးရေး တစ်သိန်းနှစ်သောင်း၏ သုံးပုံ တပုံသာ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆေးဝါးအချို့ လက်ခံရရှိပြီး ကျန်နှစ်ပုံမှာ မရှိပဲ နေထိုင်နေကြရသည်ကိုလည်း ကုလသမ၈္ဂ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ အတိလင်းထုတ်ဖေါ်တောင်းဆိုထားပြန်သည်။ ထို့အပြင် ဆေးဝါးအလုံအလောက်ဖြင့် ကာကွယ်ကုသခြင်းမခံရသောကြောင့် သာမန်ရောဂါ အဖျားအနာလေးမှ အဆုပ်တီဘီ နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ငှက်ဖျားရောဂါတို့ပါ ထပ်မံခံစားနေကြရသည်ဟု ဆိုသည်။ ၄င်း အမ်အစ်အက်ဖ်မှ တာဝန်ခံများဖြစ်သော ပီတာပေါနှင့် ဒီဂရုတီ တို့မှ ပြောကြားရာတွင် ဆရာဝန်အတော်အတန်သင့်ရှိနေသော လက်ရှိမြန်မာပြည်သည် ကျယ်ပြန့်သော ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ အားနည်းပြီး ထိရောက်လုံလောက်သော ဆေးဝါးများမရှိပါဟု ဆိုလေ၏
MSF says onlyathird of the 120,000 people living with HIV in Myanmar who under World Health Organization (WHO) standards should receive antiretroviral are being treated.The shortage of medicine extends to other serious illnesses including tuberculosis and malaria.The country hasarelatively high number of doctors but lacks medicines and wider support systems to treat patients, said MSF head of mission Peter Paul de Groote.
မြို့ပြဒေသများတွင် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူခွင့် အတော်တန်ရှိသလာက် မြို့ပြနှင့် အလှမ်းဝေသော ဒေများအတွင်းရှိ နေထိုင်နေသူ လူဦးရေများသည် ကျန်မားရေးဆိုင်ရာ စောင့်ေ၇ှာက်အလေးပေးခံရမှုမှာ အလွန် ချို့တဲ့အားနည်းပြီး ပြည်တွင်း မငြိမ်သက်မှုနှင့် အမျိုးအမျိုးသော မသင့်မြတ်ခြင်းမှ ပုတ်ကန်တော်လှန်မှုတို့ဖြင့် အစိုးရနှင့် တော်လှန်သူတို့ တိုက်ခိုက်ကြကာ စစ်ပွဲများ ဖြစ်နေသော ဒေသများက ကျန်းမာရေးအခြေနေပိုဆိုးဝါနေ၏။
Most of Myanmar's population live in rural areas, while health services are concentrated in larger towns and cities. This means the health needs of most of the population of more than 50 million are unmet, especially in areas where conflict between the government and various rebel groups or inter-communal violence still occurs.
ထိုင်းမြန်မာ နယ်ခြားမျဉ်း တလျောက်ဖြစ်သည့် ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် ချည်နှောင်ကျင်းခတ်ခံနေရသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက်ဒေသတွင် မွေးကင်းစ မွေးမိခင်များမှ သူတို့၏ ရင်သွေးငယ်များအား အသက်ရှင်အောင် စောင့်ရှောက်ရသည့် အခက်ခဲသည် အလွန် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်စိတ်ပျက်စရာများ ကြုံတွေ့နေရပြီး တိုင်းပြည်တပြည်တွင်ရှိသော ခလေးမွေးဖွားရာတွင် အသာတင် ကျန်မားအသက်ရှင်မှုရှိသင့်သော ခလေးနုံန်းထားမှာ အခြားသောနေရာများထက် သုံးဆ ကျဆင်းနေကြောင်းနှင့်၊ ခလေးငယ်ပေါင်းမွေးဖွားမှု တသိန်းတွင် ခလေး ၂၄၀ ယောက်မျှ သေဆုံးကြောင်း စစ်တမ်းများက ဆိုနေကြသည်။
Violence has warped malaria control along the country's border with Thailand, and frustrated attempts to keep mothers and their newborns alive in eastern Myanmar, where the maternal mortality ratio is more than triple the national average of 240 per 100,000 live births.
လက်ရှိ အရေးခင်းများဖြစ်ပေါ်နေသော ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း တို့တွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်ခံရမှု ကြောက်ခမန်းလိလိ ဖြစ်နေသော ဆိုးဝါသည့် နေရာပြည်နယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနေကြောင်းအား (အမ်အစ်အဖ်) ဟော်လနမှ ပြောဆိုခဲ့သည်။
Recent inter-communal violence in Rakhine State, in the north, has turnedabad state of health access intoa"desperate" one, said Médecins Sans Frontières (MSF)-Holland.
၂၀၁၁ နှစ်တွင် တတိုင်းပြည်လုံးဝယ် ဆရာဝန်ပေါင်း နှစ်သောင်းခြောက်ထောင် လေးရာ သုံးဆယ် ငါးယောက် ရှိပြီး ထိုအထဲမှ အများစုဖြစ်သော တစ်သောင်း ငါးထောင်း ငါးရာ ရှစ်ယောက်မှာ မိမိ ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားသောကြောင့် ယနေ့ရှိသော တိုင်းပြည်လူဦးရေ အများစုအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်ပေးနိုင်မှု ကိစ္စမှာ အလွန် အလှမ်းကွာနေကြောင်း တွေ့ရသည်။
In 2011, the country had 26,435 doctors nationwide, but most (15,508) are in the private business sector, where services are unaffordable to most the population.
နောက်ဆုံးကောက်ချက်ချ တင်ပြရသော် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၂ ခုတွင် တိုင်းပြည်သူပြည်သားများအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက် ၀န်ဆောင်ပေးမှုသည် လူတဦးလျှင် တနှစ်ပတ်လုံးစာ အမေရိကန်ဒေါ်လား၁၀ ဒေါ်လာ ( မြန်မာငွေ ၈၅၀၀) ကျပ်ကိုသာပင်သုံးစွဲခဲ့ကြောင်းသိရပြီး မေရိကန်ဒေါ်လာ (၂)ဒေါ်လာကိုသာ လက်ရှိနေပြည်တော် မြန်မာအစိုးရမှ ခွင့်ပြုစေပြီ ကျန်သော အမေရိကန် ၈ ဒေါ်လာအား လူနာနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အန်ဂျီအို ၊ လူမှုကူညီရေးအသင်းဖွဲ့များမှ ထည့်ဝင်ဆောင်ရွက်နေရသော အခြေနေဆိုးတွင် တိုင်းပြည် ဖြစ်တည်နေလေသည်။ သို့သော် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ယခုနေပြည်တော် အစိုးရအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ တွင်တွင်လုပ်နေပါကြောင်းအား ထပ်တလဲလဲ သရုပ်မှန်စာရင်းဇယားများကိုဆန့်ကျင်ကာ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး ကျားကန်ပေးနေပါကြောင်း သိရသည်။
In 2011-2012, people spent an average of US$12 per person per year on healthcare, of which only $2 came from the government, with the rest being covered by NGOs and patients. But Myanmar democracy leader, Daw Aung San Suu Kyi repeatedly speaks out that the current government is heading to democratic concerning goal asachange.
အချက်လက်မှန်များအား ၇ည်ညွန်း လေ့လာတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ရောက်အောင် ကြိုက်သလောက် ရှယ်ယူကာ မူရင်း တင်ပြသူ၏ ကလောင်အား ဖြုတ်ထုတ်ခြင်းမပြုကြပါရန် အနူးညွန့် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 4/25/2013 02:36:00 AM